ပေါ်တူဂီဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
[puɾtuˈɣeʃ], [poɾtuˈɡes], [poʁtuˈɡes], [poɹtuˈɡes], [poɦtuˈgejʃ]
ဒေသရင်း: ၂၅၀ မီလီယံ;e21
၂၄ မီလီယံ ဒုတိယဘာသာစကား(L2); စုစုပေါင်း: ၂၇၄ မီလီယံ
လက်တင် (ပေါ်တူဂီ အက္ခရာ)
Manually coded Portuguese
လစ္စဘွန်း သိပ္ပံအကယ်ဒမီ (Lisbon Academy Class of Letters)
ယဉ်ကျေးမှု သို့မဟုတ် ဒုတိယဘာသာစကား
ဤဆောင်းပါးတွင် IPA အသံထွက် သင်္ကေတများ ပါဝင်သည်။ မှန်ကန်သော ထောက်ပံ့မှုမရှိပါက ယူနီကုဒ်စာလုံးများအစား ? များ၊ လေးထောင့်ကွက်များနှင့် အခြားသင်္ကေတများ မြင်နေရနိုင်သည်။ IPA သင်္ကေတများ မိတ်ဆက်ကို Help:IPA တွင် ကြည့်ပါ။
ပေါ်တူဂီဘာသာစကား(português သို့မဟုတ် အပြည့်အစုံအားဖြင့် língua portuguesa) သည် ဥရောပတိုက်၊ အိုက်ဘေးရီးယန်းကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ရိုမန်ဘာသာစကား(Romance language)ဖြစ်သည်။ ထိုဘာသာစကားသည် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ၊ ဂင်းနီဗစ်ဆောနိုင်ငံ၊ ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ၊ ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီနိုင်ငံနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံတို့တွင် တခုတည်းသော တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး အရှေ့တီမောနိုင်ငံ၊ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ နှင့် မကာအိုဒေသတို့တွင် တွဲဖက်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီစကားပြော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကို "လူဆိုဖုန်း"(lusófono) ဟု ရည်ညွှန်းကြသည်။။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် နယ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်များအဖြစ် ပေါ်တူဂီ ယဉ်ကျေးမှုတည်ရှိနေခြင်းနှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာနှောပြောသူများကို ကမ္ဘာအနှံ့တွင် တွေ့ရသည်။ ပေါ်တူဂီဘာသာစကားသည် အလယ်ခေတ်နိုင်ငံဖြစ်သော ဂါလိလဲပြည်(Kingdom of Galicia) နှင့် ပေါ်တူဂီကောင်တီတို့တွင် ပြောဆိုသည် ဗူဂါ-လက်တင်(Vulgar Latin )၏ များစွာသော ဘာသာစကားခွဲများမှ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သည့် အိုင်ဘီရို-ရိုမန်အုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး အချို့သော ဆဲလ်တစ်ဝါစဿရဗေဒနှင့် ဝေါဟာရတို့ ပါဝင်သည်။
မူရင်းစကားပြော ၂၁၅ မှ ၂၂၀ မီလီယံခန့်ရှိပြီး ဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုသူ ၅၀ မီလီယံခန့်ရှိ‌သောကြောင့် ပေါ်တူဂီဘာသာစကားပြောဆိုသူသည် ၂၇၀ မီလီယံခန့်ရှိသည်။ ‌ပြောဆိုမှုအများဆုံးသော ဘာသာစကား ၆ ခုထဲတွင် ပါဝင်ပြီး မူရင်း‌ပြောဆိုသူများအရ တတိယမြောက် ပြောဆိုမှုအများဆုံးသော ဥရောပဘာသာစကားဖြစ်သည်။ တောင်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းတစ်ခုလုံးနှင့် တောင်အမေရိကတိုက်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ပြောဆိုသော ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး စပိန်ဘာသာစကားပြီးလျှင် လက်တင်အမေရိကတွင် ဒုတိယမြောက် ပြောဆိုမှုအများဆုံးသော ဘာသာ၊ အာဖရိကတိုက်တွင် အများဆုံးပြောဆိုသော ဘာသာစကား ၁၀ ခုထဲမှ တစ်ခုနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၊ တောင်အမေရိက ဘုံဈေး၊ Organization of American States၊ Economic Community of West African States၊ အာဖရိကသမဂ္ဂ၊ Community of Portuguese Language Countries နှင့် Lusophone nations များ တရားဝင်ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပြည့်စုံစုံလင်စွာသင်ကြားနိုင်သော အကယ်ဒမစ်ပညာရေး‌တွင် ပေါ်တူဂီဘာသာစကား၏ ဘရာဇီးအခွဲဘာသာစကားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးသော ဘာသာစကား ၁၀ ခုမှ ၁ ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named e21
↑ Continúan los actos del Día de la Lengua Portuguesa y la Cultura Lusófona (10 May 2016)။
↑ Gutiérrez Bottaro၊ Silvia Etel (2014)၊ "El portugués uruguayo y las marcas de la oralidad en la poesía del escritor uruguayo Agustín R. Bisio" [Uruguayan Portuguese and oral marks in the poetry of Uruguayan writer Agustín R. Bisio] (PDF)၊ abehache (စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်)၊4(6)၊ 12 August 2019 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 18 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Historia lingüística del Uruguay။
↑ Fernández Aguerre၊ Tabaré; González Bruzzese၊ Mahira; Rodriguez Ingold၊ Cecilia (2017)၊ Algunas notas teórico metodológicas sobre la relación entre regiones y aprendizajes en Uruguay [Some theoretical methodological notes on the relationship between regions and learning in Uruguay] (စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်)၊ pp. 11–15၊ hdl:20.500.12008/10776
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Portuguese"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Estados-membros (in pt) (7 February 2017)။
↑ e.g., Cape Verdean Creole, the most widely spoken of these
↑ The Origin and Formation of The Portuguese Language။ Duke University။ 10 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bittencourt de Oliveira၊ João။ Breves considerações sobre o legado das línguas célticas။
↑ CIA World Factbook။
↑ Potencial Económico da Língua Portuguesa။
↑ Admin၊ e2f။ What are the5official languages of South America? (in en-US)။6October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lesson Nine: How Many People Speak Portuguese, And Where Is It Spoken? (in en)။
↑ Top 11 Most Spoken Languages in Africa (2017-10-18)။
↑ "The World's 10 most influential languages", George Werber, 1997, Language Today, retrieved on scribd.com "...includes besides many other languages, Bengali, English, French, German, Hindi/Urdu, Italian, Marathi, Panjabi, Persian, Brazilian (Portuguese), Russian, the Scandinavian languages, and Spanish." "Portuguese today means above all Brazilian."
↑ Bernard Comrie, Encarta Encyclopedia (1998); George Weber, "Top Languages: The World's 10 Most Influential Languages", Language Today (Vol. 2, December 1997). Archived from the original on 2011-09-27. Retrieved 2011-09-28.
ဤ ဘာသာစကားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပေါ်တူဂီဘာသာစကား&oldid=728572" မှ ရယူရန်
CS1 စပိန်-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (es)
ပေါ်တူဂီဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။